Sida loo shaqeeyo xaddidaadda laba qaybood oo ah UTM - Gofumed
Oktoobar, 2009 Cartografia, Microstation-Bentley
Waxaan inta badan haysannaa dhibaatada ka jirta xadka UTM UM, waxaananu isu aragnaa ulaha sababtoo ah iskudhafyada aan shaqayn.
Sababtoo ah dhibaatada
Wakhti hore ayaan sharaxay sida UTM isku duwo shaqadaHalkan waxaan diirada saari doontaa oo keliya on dhibaatada. Shaxda soo socota waxay muujinaysaa sida ay u dhexeeya Costa Rica, Honduras iyo Nicaragua jiro isbeddel dhexeeya goobaha 16 iyo 17; taas oo muujinaysa in kuwii wadataa calaamadeeyay in wareegyada cad lagu celiyo. dhibic A qaaday ee Mosquitia Honduran ee, haddii aan la sheegay in ay tahay aagga 17 ku dhici lahaa Guatemala ee degaanka 16 halka mid ka mid ah xeebaha Atlantic Nicaragua ee dhici lahaa Badweynta Pacific, kaliya dhici in mid ka mid on Island ee Cano ee Costa Rica.
Tani waa sababta oo ah xariijinta UTM waxay qaadataa meridiyaal dhexe, oo leh x isku-xero 500,000 oo halkaasna way sii socotaa ilaa laga gaaro heerka xadka. Habkani marnaba ma noqon doono wax xun. Laakiin natiijada, iskudhafyada ma aha mid gaar ah, waxaa lagu soo celiyaa aag kasta iyo xarun kasta.
Waxaan doonayaa inaan u adeegsado tusaalahan iyadoo la adeegsanayo Microstation Geographics hadda Bentley Map, waa inay ahaataa mid la mid ah AutoCAD: Waxaan doonayaa in aan ku daboolo muuqaal, oo leh afarta koollo ee geeskeeda. UTM waa wax aan macquul ahayn, sababtoo ah markaad galeyso dhibcood, laba ayaa ku dhici doona Guatemala.
1 U beddel UTM isku duwaha isku-duwidda juquraafi. Tan waxaa lagu sameyn karaa barnaamij kasta oo socda, halkaas ka hor Waxaan soo gudbiyay warqad Excel oo sameeya waqtiyadan. Natiijadu waxay noqon doontaa tan:
2 Isbeddel nidaamka isuduwidda ee Microstation. Tani waa si aan u geli karno qodobadaas.
Waxaa lagu sameeyaa: Qalabka> Isku dubaridaha Nidaamka> Master
Halkan waxaan dooran icon ugu horreeya (edow macallin) waxaanan tilmaameynaa in nidaamka isku-duwani yahay juqraafi. Had iyo jeer hayso Datum WGS84.
Kadibna ka dooro gudigan doorashadan Master-ka oo aynaan hayn. Nidaamka wuxuu na waydiin doonaa su'aalo dhowr ah, si aan u hubinno inaan ogaanno waxa ay u muuqato, waxaanu aqbalnaa dhammaan saddexda jeer. Laga bilaabo hadda, waxaan ka geli karnaa isku-duubnaanta dhinaca badmaaxiinta.
3. Gali isku-duwayaasha. Tani, waayo, dhibco yar ayaa loo qabtaa via keyin; kicinta amarka taliska, ka dibna furin aan qorno:
waxaynu u sameeynaa kuwa kale:
xy = -83.0558,16.1965, gali
xy = -83.0786,14.2661, gali
xy = -85.1649,14.2885, gali
Haddii aadan rabin inaad jebiso qumbaha waxaad ku dhigi kartid iyaga oo ku dhajin kara cabirkooda oo ku dhejin kara amarka uu yahay loo sameeyay.
Natiijada ka soo baxda qodobbadu waa, labada dhinac ee xuduudda aagga.
Waxa kaliya ee aan hadda sameyneyno waa sawirka sawirka. Tani waxaa laga sameeyaa maamulaha raajada, taas oo muujinaysa in sawirka la dhexdhexaadin doono isla markaana tilmaamayo meesha ugu sarraysa ee bidixda ka dibna midigta hoose.
Halkaas ayay ku leeyihiin:
Ka waran sawirada:
Waxyaabaha la midka ah waxay ku dhici doonaan alaabooyinka loo qaybiyay aagga xadka; waxa la sameeyaa waa in gundhigyada loo rogo goobaha joqoraafiga ah si ay u helaan meel keliya. Fikrad ayaa ku jirta aaggaas si kor loogu qaado dhibcooyinka adoo dejinaya GPS si loo qabto isku-duwidda juqraafi.
Post Previous«Previous Obelix iyo Asterix waxay gaareen 50 sano
Post Next gvSIG, in ay ku sugan 5tas. maalmoodNext »
17 Jawaab in "Sida loo shaqeeyo xaddidaadda laba meelood oo UTM ah"
Ma hubo inaan fahamsanahay waxa aad ku mashquulsan tahay.
Haddii ay ku dhacdo inta u dhaxaysa laba aag, waa inaad dib uga fakartaa iyada oo la adeegsanayo isuduwid juquraafi, nooca roon / xajmiga.
Sidee asal ahaan u leeyihiin?
Haabiil isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan haystaa FADLAN FADLAN KALSOON SANUUQ OO LAGU SAARAY LABAAD AADAN: 17 18
Anigu ma ogi sida ay u socoto
HALKAN WAXAAN U BAAHAN TAHAY IN LAGU QAADO
DARYEELKA KUBADA GOOGLE KUWA KUWA KUWA SHAQAAL KA HELI KARTAA WAXA LAGA QAADAY DALKA WAX KA HELI KARAA WAX KA BADAN ADIGA SI AAD U BADAN YAHAY
Hal ikhtiyaar waa inaad u dirto Google Earth halkaasna waad ku hubin kartaa adoo dhaqaajinaya griiga shahaadada. Salaan daldaloolooyinka iyo harooyinka; Markaynu halkaas marayno waxaannu cunnaa rooti.
Ing. Carlos Aguilar isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan qabaa dhibaatada soo socota
Waxaan isku duubnahay qaabka XY, qaar ka mid ah fallaadhahan 16 ZONE laakiin waxaan ka shakisanahay in dadka kale ku dhacaan 17 ZONE, sideen ku ogaan karaa ZONE inay ka yimaadeen?
Cralos isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan wgs84 dhibcood aagga 17N oo waxaan iyaga u soo bandhigaan qaab ah ee wadanka oo dhan ee aagga WGS 84 17 South, mashruuca ee 10.2 arcgis ayaan ka heli qalad, mahad tahay caawimada
Carlos Antonio Cabrera Gomez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rajeynayaa inaan sii wado barashada aqoontan, ka dibna fuliya barnaamijyadeeda, waxaan u dirayaa la-talinta lagama maarmaanka ah iyo horeyba waxaan rajeynayaa in guusha ay tahay tiknoolajiyada sare ee ay adeegsadeen Geodesy iyo Topography.
Taasi waa lama huraan.
Waad beddeli kartaa bariga beenta ah, sidaa darteed udub dhexaadka meridian waa dherer kuu oggolaanaya inaad wax walba ku haysato xargaha isku midka ah. Faa'iido darrooyinka isuduwahaaga ayaa is beddela.
Habka kale waa in laga shaqeeyo waddooyinka iyo cimri dhererka.
Saaxiib ayaan ka shaqeynayaa Arcgis 9.3, waad ogtahay sida aan u bedeli karo hal degaan kaliya.
Aad baad u mahadsantihiin caawimaad.
Saaxiibow salaan, ma i caawin kartaa, waxaan haybta macluumaadka ku leeyahay aagga daraasadayda laba qaybood oo kala duwan 17S iyo 18S, waxay ku jiraan isla nidaamka tixraaca WGS84. Tani waxay ka dhigeysaa in macluumaadka uu noqdo mid barakac ah maxaa yeelay ka mid ahaanshaha aag kaladuwan waxaanan u baahanahay inay ahaadaan kaliya 18S.
Hambalyo ku saabsan boogahaaga
Old wanaagsan blog-kaaga, laakiin sumcadda aad u badan ee qof walba ka baqayaa, waxay umuuqataa inaad quus ka taagan tahay, waan ogahay inaadan ii ogolaan doonin, kahor intaan tayadeedu fiicnayn, laakiin biilasha ayaa badalay fekerka «shaqada».
Ma aqaan Waa lagama maarmaan in la caddeeyo, sawirradu waxay qaadi karaan saadaalintooda, laakiin marka la abuurayo khariidad cusub oo hawlgal ah waxay ku jiri kartaa isuduwe joqoraafi ahaaneed sidaa darteedna waa in lagu canaanto duullimaadka.
Iyo Manifold, sidee ayaa laba luuqadood oo ka mid ah (PNOA, UTM) la isugu dhejin karaa qalab kale?
Hello runta waa in sharaxaad waa mid aad u wanaagsan, laakiin waxaan jeclaan lahaa q fadlan ka koobanahay maqaal ku saabsan sida ka shaqeeya meel ka mid ah xirmi.
Dhibaatada leeyahay waa q q aan dalka Bolivia this saddex aag, 19 ku 20 iyo 21 oo aan duwo inta badan waa kuwan wakhtiga 19, laakiin qayb ka mid ah galaan aagga 20 (goobta isa).
Waxa aan rabo inaan weydiisto waa inaan ka shaqeeyo labada xargo ama kaliya hal silsilad.
Thanks ka hor iskaashiga aad iyo run q waa page buenisima, Siguan weeraryahanka kale iyo mar kale mahad tahay caawimada.
Waxaan qiyaasayaa inaad ka hadasho xog la’aan joqoraafi ahaan. Sidoo kale, waxaad u qoondeysaa meel tixraac ah oo aad ku dhaqaaqdid, kuwa ku dhaca aagga kale waxay u beddelayaan beero iyo dhaadheer.
Tani waa hab wanaagsan oo loo shaqeyn karo, WAXAAD WAXAY TAHAY, MIDOW, markaad hagaajisid dhibcaha isku dhafan markaad ku dhejisid elektarooniga
Saaxiibkaas oo kale wuxuu ugu hambalyeynayaa bartiisa, dad yar oo ku sugan adduunkan waxay wadaagaan qayb waqtigooda ka mid ah oo ay ku taageerayaan wadajirka codsiyada kala duwan ee sahaminta iyo injineernimada bulshada, waxaan la socday arrimaha aad ku faafisay bartan dhexdhexaad dhowr bilood , qayb ka mid ah waxay ii adeegeen sidii aalad muddo gaaban, maxaa yeelay arrimaha shaqada waxaan u arkaa inaan yahay shaqsi-cadade iyo sida shaqadeyda madaxbanaan ee gaarka ah waxaan haystaa isugeyn xarun SOKKIA 630RK, iyo in kastoo ay sabab u tahay mushaharkeyga shaqadu waxay iga horjoogsataa inaan nafteyda u hibeeyo topography-yada marwalba. Waxaan raadinayaa mowduucyo igu cusboonaysiiya dhamaan waxyaabaha sawirada iyo alaabada injineeriyada rayidka ah, oo kufiican in aanan nafteyda u kordhinin waxaan ku iri nabad galyo